Ungayenza kanjani i-invoyisi? | Ezezimali Zomnotho
I-invoyisi idokhumenti esetshenziselwa noma yini Ukuthengiselana kwezohwebo. Okusho ukuthi, lapho uyothenga umakhalekhukhwini, ifoni noma okuthile okuhle. Lapho ukusebenza okwenzile kuzobonakala khona. Kepha manje, kunesinye isigaba sama-invoyisi asuselwe emsebenzini noma kusevisi oyinike abantu besithathu. Yibo abasebenzisa kakhulu intshisekelo futhi, phakathi kwezinye izizathu, ngoba imvamisa abazi ukuthi kufanele kwenziwe kanjani ngokusemthethweni. Ngoba noma yiliphi iphutha lingaba nemiphumela engadingeki kuzintshisekelo zakho.
Incazelo yangempela yalokho i-invoyisi itholakala ku idokhumenti yezentengiso lokho kukhombisa ukuthengiswa kwempahla noma isevisi futhi, ngaphezu kwalokho, kufaka yonke imininingwane yokusebenza. Ukwenza kube lula kuwe ukuthi ukuqonde, kungukugunyazwa komsebenzi wokuhweba, noma kungaba yini. Kufike ezingeni lokuthi udlule kuzo zombili izingxenye zale nqubo. Ngamanye amagama, uzobe ukhiphe futhi wamukela zonke izinhlobo zama-invoyisi ngengxenye enhle yempilo yakho.
Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi ungayifaka kanjani i-invoyisi ngokusemthethweni futhi ungenzi amaphutha ekubhalweni kwayo. Ukuze lokhu kube njalo, akukho okungcono kunencazelo elula yokuthi kufanele wenze kanjani yenza lo mbhalo ube semthethweni kusuka manje. Kuzoba wusizo olukhulu empilweni yakho yansuku zonke futhi kuzosizakala nokukusebenzisa kunoma iyiphi indawo yempilo. Hhayi emkhakheni wakho wobungcweti kuphela, kepha futhi nakwezinye izici zempilo yakho yangasese, njengoba uzobona ngezansi.
1 Kubhalwa i-invoyisi
2 Enye idatha kudokhumenti
3 Inani elizokhokhiswa
4 Ungayibala kanjani intela yomuntu siqu engenayo?
5 Ukubalwa kwe-VAT yangempela
Kunochungechunge lwemininingwane okungafanele ilahleke lapho uyolungisa i-invoyisi. Ngamamojula ahlukahlukene ahlukaniswe ngokufanele nokuthi sizokwethula manje nemininingwane eyisisekelo okumele ifakwe kulo mbhalo ovame kakhulu kuzo zonke izakhamizi.
Imininingwane yomhlinzeki we-invoyisi: kufanele ufake imininingwane elandelayo efana namagama nezibongo, ikheli ne-NIF noma i-CIF. Kuyalulekwa futhi ukuthi ufake inombolo yokuxhumana uma kwenzeka kuvela isehlakalo esidinga ukucaciselwa kwakho.
Inombolo: yilapho ingxenye enhle yamaphutha engxenyeni yabasebenzisi ihlala khona. Ngoba lezi zinombolo kumele zihambisane maqondana ne-invoyisi. Ungakhohlwa ukuthi kumele zi-odwe ngokuqhubekayo (1,2, 3, 4 ...) kungakapheli unyaka wezimali ofanayo. Ukuqala kabusha ngenqubo ngokushintsha konyaka omusha.
Usuku: kucace njengokubeka ngokusobala usuku lokukhishwa kwe-invoyisi. Ngalo mqondo, iseluleko esisebenza kakhulu ukuthi sihlobene nenombolo ye-invoyisi. Kuyinto efiselekayo ukuthi akukho ukwehluka enyangeni ngayinye ehlanganiswe yile mibhalo.
Enye idatha kudokhumenti
Lokhu okungenhla, uma kubalulekile, akubona kuphela okufakiwe okufanele kuboniswe kulesi sigaba semibhalo yezimali. Kukhona ezinye ezizovela futhi ekubhalweni kwakho futhi ongeke uzikhohlwe lapho wenza i-invoyisi yalezi zici. Njengoba imininingwane elandelayo ngezansi sikukhomba kulolu lwazi:
Umqondo: kufanele unikeze incazelo ngemvelaphi ye-invoyisi ozoyikhipha noma oyithumele kubantu besithathu. Ngokuqondene nesibonelo, ukubeka ukuthi iyi- umkhiqizo noma isevisi. Futhi-ke, kufanele unikeze imininingwane ngenkathi oyenza ngayo. “Izinsizakalo zokuhumusha ezenziwa ngenyanga ka-Ephreli” kungaba esinye sezizathu ezichaza umsebenzi walesi sigaba.
Isisekelo esingakhokhiswayo: Ngeke ube nokhetho ngaphandle kokulinganisa zonke izintela ezixhunyaniswe nale invoyisi. Lapho kokubili i-Personal Income Tax (IRPF) ne-VAT kungahle kungatholakali ekubalweni kwemali yamanani afunwayo.
Ukugodla intela: esimweni sabasebenzi abazisebenzayo, okungukuthi, i- oziqashile, kuzodingeka ukucacisa ukuthi yikuphi ukubanjwa okufanele kusetshenziselwe izinsizakalo zakho zomsebenzi Kubekiwe, kuya ngemigomo, kuye ngo-7% no-15%. Kufanele wazi ukuthi yimaphi kulawa mali amabili okufana nawe ukufaka i-invoyisi.
I-VAT: Kunoma ikuphi imininingwane engakhethwa ngokuya ngesimo sakho sobungcweti. Leli inani le-Value Added Tax okufanele uyiqoqe kwi-invoyisi. Imvamisa ifana ne-21%. Kepha kwezinye izimo eziqonde ngqo i-invoyisi ingaxhunyaniswa nesilinganiso se-VAT esincishisiwe noma esingaxolelwa. Kuzoncika futhi nakwisimo okuso.
Uma usugcwalise kahle zonke lezi zingxenye zedokhumende, kuzofanele ufinyelele kuphela enanini lokugcina, okuyinani okufanele ukhokhe noma uthole ngalo ngenxa yenkonzo noma umsebenzi owenziwe.
Ingqikithi: Kulula kakhulu ukubala ngoba kubandakanya ukukhipha yonke intela (intela yomuntu siqu kanye ne-VAT) kwisisekelo sentela esihambelana nawe. Futhi imiphumela kabani kuzoba inani lokuqedwa komsebenzi. Ngaphandle kwezinkinga eziningi ukufinyelela lo mphumela wenqubo esichaze ngaphambilini.
Indlela yokukhokha: kulesi sigaba kuzodingeka uveze kuphela ukuthi yiluphi uhlelo lokukhokha ofuna ukulucacisa. Yize into ejwayelekile kakhulu ukuthi ubeka i-akhawunti yamanje ongumnikazi wayo, amanye amamodeli nawo avunyelwe. Njengesibonelo, amasistimu amasha wokukhokha nge-Intanethi noma amanye amafomethi ahlukile. Vele, akunamkhawulo futhi ungabeka leyo oyifunayo ngempela. Akekho ongaphoqa omunye kuwe. Ungakhohlwa kusukela manje kuqhubeke.
Ungayibala kanjani intela yomuntu siqu engenayo?
Lokhu kungukusebenza okubaluleke kakhulu ngaphakathi kwe-invoyisi. Phakathi kwezinye izizathu ngoba ukugcinwa kwayo kwenziwa kuphela ngabasebenza ngokuzimela abaqeqeshiwe. Abasebenzi abazisebenzayo kanye nezinkampani akudingeki bakwenze lokho kugodla ngaphansi kwanoma iziphi izimo. Ukuze wazi ukuthi yikuphi okuhambisana nawe, akukho okungcono ukuthi ubheke le ncazelo elandelayo.
Intela yomuntu siqu engenayo ingajwayelekile noma yehliswe kuye ngezimo zakho ezijwayelekile. Ngakho-ke, kuzoba yini okwakho?
Inciphisiwe intela yemali yomuntu siqu kokuzisebenza okusha: kuzofanele ukhokhe u-7% kuze kufike ezinyangeni zokuqala eziyi-18 njengochwepheshe ngaphansi kwalezi zimo esimweni sakho samanje.
Intela ejwayelekile yemali engenayo kongoti abazisebenzelayo: kulokhu kuzoba yi-15% kuzo zonke izimo nezimo futhi abahlukile. Imvamisa kuba yiso okufanele usisebenzise uma ingekho eminye imibandela esho okuphambene nalokho.
Njengoba kungenzeka ubonile, igxathu negxathu, ubunzima ngeke bube baluleke kakhulu, noma ngabe kungokokuqala ukwenza, ungaba nenye inkinga lapho ulungisa lo mbhalo esibhekene nawo. Uzosala nemininingwane ethile ukuze yonke into ilunge. Ngoba kusekupheleni kosuku ukuthi imayelana nani.
Ukubalwa kwe-VAT yangempela
Kusasele ukulinganisa ukuthi yini i-Value Added Tax okufanele uyibeke ku-invoyisi. Uma nje kufanele ukwazise ngoba hhayi kuzo zonke izimo kuzoba yisibopho, njengoba besike saphawula phambilini. Ngoba ungakukhohlwa lokho asikho isilinganiso esifanayo se-VAT. Uma kungenjalo ngokuphambene, eziningana ngokuya ngomsebenzi wobuchwepheshe lo mbhalo oxhunywe kuwo ekubalweni kwabasebenzi. Lokhu okulandelayo esikudalula ngakho ngezansi:
I-VAT encishiswe kakhulu: ilingana no-4% futhi imiselwe isinkwa, ubisi, izithelo, okusanhlamvu, ushizi, izincwadi, amaphephandaba kanye nomagazini abangakhangisi, imithi, izihlalo ezinamasondo, nezitho zokufakelwa, phakathi kweminye imiqondo.
Kwehlisiwe i-VAT: kulokhu inyukela ku-10% futhi ifaka, phakathi kweminye imiqondo, ukudla ngokujwayelekile, ezokuthutha, izitshalo kanye nemibukiso yezemidlalo ye-amateur.
I-VAT ejwayelekile: liphezulu kunawo wonke njengoba lifinyelela ku-21%. Isicelo sayo sixhumanisa cishe nayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo, ngaphandle kwalezo ezifakiwe kwi-VAT encishiswe kakhulu noma encishisiwe.
Ekugcineni, kungenzeka futhi ukuthi akudingeki ukuthi wenze ama-invoyisi kulolu hlobo lwe-Value Added Tax. Lokho kusho ukuthi nguwe akhululiwe kokubhaliselwe kwayo okuhambisanayo. Kodwa-ke, kunzima impela ukuthi ukhiphe i-invoyisi enalezi zici. Lokho wukuthi, ngeke kudingeke ukuthi usebenzise lesi silinganiso sentela ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Kunoma ikuphi, futhi ngaphandle kokukuqaphela, uzobe usufinyelela esiphethweni sokuthi ukhiphe i-invoyisi cishe unganakile. Hhayi ngeze, ubunzima bayo buncane maqondana nezinye izinhlobo zamadokhumenti ezidinga ulwazi olukhulu lwe-accounting. Ngaphezu kwalokho, uma usuyenzile eyodwa, kuzoba wusizo kuwo wonke umuntu ngoba ukuhluka okumbalwa kakhulu kusuka komunye kuya komunye.
Ngakolunye uhlangothi, kuzoba ithuluzi eliwusizo kakhulu uma kwenzeka ukuthi ubhalise njengomsebenzi oziqashile noma, kunalokho, uthathe isinqumo sokusungula inkampani yakho noma inkampani elinganiselwe futhi uqale inkampani yakho. Ngoba kuzo zonke lezi zimo kuzodingeka ulungiselele irisidi yalezi zici. Noma kunjalo ngeke kukukhokhele umzamo owedlulele ekubhaleni kwakho ukuwuthumela futhi ufinyelele kumamukeli wawo usesimweni esifanele. Okuphela kosuku ukuthi kuyini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Ungayenza kanjani i-invoyisi?